सबभन्दा महान् मान्छे
चीनका महानतम दार्शनिक मानिने व्यक्तित्व हुन्– कन्फुसियस । उनी ईसा पूर्व छैटाँँै शताब्दीमा चीनको लु नगरस्थित त्से गाउँमा जन्मेका थिए । एक चोटी राजाले उनलाई सोधे– संसारका सबभन्दा महान् मान्छे को हुन्, कन्फुसियस ? उनले सहजै जवाफ पस्के – हजूर हुनुहुन्छ, महाराज । राजाले पुनः प्रश्न तेस्र्याए– किन होला कन्फुसियस ? उनले जवाफ पस्के– किनभने हजूर सत्यका, ज्ञानका प्यासी । त्यसैले हजुर सबभन्दा महान् मान्छेमा पर्नुहुन्छ ।
टाउको हल्लाउँदै राजाले फेरि सोधे– मभन्दा महान् अरु पनि होलान् नि, कन्फुसियस ? उनले तत्काल जवाफ दिए – हजुरभन्दा महान् मान्छे त मैँ हँु नि, महाराज । किनभने जुन ज्ञानको हजुरमा प्यास छ, त्यो ज्ञान मैले प्राप्त नै गरिसकेको जो छु । अतः हजुरभन्दा महान मैँ हुँ, महाराज । जवाफ सुनेर महाराज एकछिन् रन्थनिए ।
राजाले तुरुन्तै सोध्न भ्याए– त्यसो भए तिमीभन्दा महान् पनि नि त कोही होला नि, कन्फुसियस ?
कन्फुसियसले भनी हाले– किन नहुनु महाराज, मसित आउनुहोस्, मभन्दा महान् मान्छे चिनाइदिन्छु ।
कन्फुसियसले राजालाई एउटा गाउँमा लगे । त्यस गाउँमा एकजना ८० वर्षका बुढो बटुवाका लागि निस्वार्थ भावले कुवा खनीरहेका थिए । त्यसै बुढोलाई औँल्याएर र कन्फुसियसले राजालाई भने– राजन, ज्ञानको प्यासी भएकाले हजुर सबभन्दा महान् मान्छे, ज्ञान जानेको कारण हजुर भन्दा महान् म र महाराज आफ्नो ज्ञानलाई अरुको सेवामा समर्पण गरी कर्म गरेकाले यी बुढा सबभन्दा महान् ब्यक्ति हुन् । राजाले बल्ल चित्त बुझाए ।
आचार–दर्शनका प्रणेता थिए– कन्फुसियस । उनले आचरणसम्बन्धी तीन सय सिद्धान्त र तीन हजार नियमहरु छाडेर जान भ्याए र, ठूला–ठूला राजकीय पदमा रहेर पनि उनले कुनै भ्रष्टाचार गरेनन् । यहाँसम्म कि, उनले आफ्नो लागि गतिलो बाससमेत बनाएनन् । उनको महानतालाई कदर गर्दै कसैले सोधेका थिए– कन्फुसियस हजुरलाई हामीले कसरी सम्झने त ? एक महात्माको रुपमा वा महान् त्यागीको रुपमा ?
कन्फुसियसले आफ्नो प्रत्युत्पन्नमति प्रगोग गर्दै भने– म अध्ययनबाट कहिल्यै सन्तुष्ट नहुने विद्यार्थी हुँ भने अध्यापनबाट कहिल्यै नथाकिने शिक्षक हुँ ।
Posted by krishnamalla01 at 2:12 AM No comments:
हिटलर र संगत
मानव इतिहासमा सबैभन्दा क्रूर मान्छेको नाउँ हो– हिटलर । तर, के उनी जन्मजातै त्यस्ता थिए त ? थिएनन् । कुल मिलाएर उनको क्रूरता उनकै संगतको परिणाम भन्न सकिन्छ ।
उनी सन् १८८९ अप्रिल २० मा अस्स्ट्रियाको एउटा सानो गाउँ ब्राउनमा जन्मेका थिए । बाल्यकालमा उनी एउटा धार्मिक आश्रममा बसेका थिए । संगतको परिणामस्वरूप यिनै बेला यिनले सन्त बन्ने सपना बुन्न थालेका थिए । प्राथमिक विद्यालयमा पढ्दा उनी अब्बल दर्जाको विद्यार्थीका रूपमा चिनिन थाले । धर्मशिक्षा मात्र होइन उनले गायन र चित्रकलामा समेत आफ्नो प्रतिभा देखाएका थिए ।
उनका बाबुका नाम थियो– एलोइस जो अत्यन्त कडा मिजासका थिए । बेलाबखत उनी हिटरललाई नराम्ररी गाली गर्नुका साथै पिट्थे पनि । यिनै दुव्र्यवहारका परिणामास्वरूप उनी १३ वर्षकै उमेरमा घर छाडी भागेका थिए । र, उनलाई उनका बाबुले कहिल्यै भेट्टाउन सकेनन् । हिटलर १८ वर्षको हुँदा उनले पैतृक सम्पति हात पारे । यस सम्पत्तिबाट उनी चित्रकला पढ्न चाहन्थे । उनले एकेडेमिज स्कुल अफ पेन्टिङमा प्रवेश परीक्षा दिए तर उनी अनुत्तीर्ण भए । यस घटनाबाट उनी तनावग्रस्त हुन पुगे । त्यसपछि उनी बरालिन थाले । रातभरि सडकमा निस्कनु, फोहोर लुगा लाएर हिँड्नु, जे पायो त्यही खानु, जस्तो पायो त्यस्तैसँग हिँड्नु उनको दिनचर्या बन्यो । यसरी उनको मनमा असन्तोष र विद्रोहको राँको बल्दै गयो । उनले हेरेको रिचर्ड वाग्नरको गिनि ओपेराले उनलाई साँच्चैको विद्रोही बनाइदियो ।
यिनैताका पहिलो विश्वयुद्ध भयो । र, हिटलरले यसैको फाइदा उठाइ सेनामा भर्ना भए । र, आफ्नो असन्तोषलाई उत्तेजक भाषणबाट सबैलाई प्रभावित पार्न सफल भए । सत्ताको उच्चतम ओहोदामा पुगेपछि उनले आफ्नो असन्तोषलाई मूर्त रूप दिन ६० लाख निर्दाेष यहुदीलाई मार्न भ्याए । र, उनी इतिहासकै क्रूरतम शासक सिद्ध भए । यदि उनले वाग्नरको ओपेरा नहेरेको भए, यदि उनले सडकछापहरूसित संगत नगरेको भए उनी असल धर्मगुरु बन्थे । त्यस्तै यदि उनले एकेडेमिज स्कुलमा भर्ना पाएको भए उनको संगत सकारात्मकखालका मान्छेसित हुन्थ्यो । र, क्रूर हिटलरकोे कहिल्यै जन्म हुने थिएन ।
Posted by krishnamalla01 at 2:08 AM No comments: